एसएमबी एपी निर्माता र आपूर्तिकर्ता - चीन एसएमबी एपी कारखाना
EAP380-E SMB स्मार्ट इन्डोर 2०२.११ac तरंग २ डुअल ब्यान्ड AP
DCN EAP380-E एक वायरलेस एक्सेस पोइन्ट (AP) SMB बजारको लागि डिजाइन गरिएको हो। यसले विस्तृत सेवा समर्थन क्षमताहरू प्रदान गर्दछ र उच्च विश्वसनीयता, उच्च सुरक्षा, साधारण नेटवर्क डिप्लोइमेन्ट, स्वचालित एसी डिस्कवरी र कन्फिगरेसन, र वास्तविक समय व्यवस्थापन र मर्मत सुविधा प्रदान गर्दछ, जुन सजिलै नेटवर्क डिप्लोयमेन्ट आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ। एपीले 2०२.११ एएसी तरंग २ मापदण्डको पालना गर्दछ र अधिकतम १.१6767 जीबीपीएस थ्रुपुट - M०० एमबीपीएस २.4 जी मा २ × २, 676767 एमबीपीएस २ × २ सहित G जी मा प्रदान गर्दछ। यो ...
EAP280-E SMB स्मार्ट इन्डोर 2०२.११ एन सिंगल ब्यान्ड AP
EAP280-E DCN द्वारा शुरू गरिएको नयाँ लागत प्रभावी उद्यम Wi-Fi AP (एक्सेस पोइन्ट) हो। यो एपीले 2०२.११ एन मानकलाई मेगा इथरनेट अपस्ट्रीम जडानको साथ समर्थन गर्दछ। EAP280-E २.4G ब्यान्डमा काम गर्दछ र अधिकतम थ्रुपुट M००Mbps सम्म हुन सक्छ। EAP280-E रेडियो, मोबाइल, सुरक्षा र ट्राफिक इञ्जिनियरि etc. आदि को बहुमुखी प्रकार्य प्रदान गर्दछ, भौतिक वा क्लाउड एसी (एक्सेस कन्ट्रोलर) को साथ उद्यम, क्याम्पस वाइफाइ नेटवर्क पहुँचका साथै डिजिटल कक्षा कोठा, वाणिज्यिक वाइफाइ प्रदान गर्न को लागी काम गर्न सक्दछ। ...
EAP220 स्मार्ट 2०२.११ac डुअल ब्यान्ड इन-वाल वायरलेस एपी
EAP220 लागत र समय बचत गर्न, र मूल सजावटको रक्षा गर्न बिना पर्खाल पुनर्निर्माण बिना, एक मानक x86 प्यानलमा स्थापना गर्न सकिन्छ। EAP220 80०२.११ एएके मानक २.G जी र G जी ब्यान्ड समर्थन गर्दछ, र available 733 एमबीपीएसको उच्चतम उपलब्ध वायरलेस ब्यान्डविथ समर्थन गर्दछ। EAP220 एक 100M अपलिंक ईथरनेट पोर्ट, एक डाउनलिंक १००M ईथरनेट पोर्ट र एक RJ11 टेलिफोन पोर्ट प्रदान गर्दछ। अपलिंक पोर्टले 2०२..3 एफ POE समर्थन गर्न सक्दछ, त्यसैले EAP220 न केवल उच्च प्रदर्शन WIFI कभरेज प्रदान गर्न सक्दछ, तर प्रदान गर्न सक्दछ ...
EAP180 स्मार्ट 2०२.११ एन सिंगल ब्यान्ड इन-वाल वायरलेस एपी
EAP180 मानक x86 प्यानलमा स्थापना गर्न सकिन्छ, r पर्खाल पुनर्निर्माण बिना समय र लागत बचत गर्न। EAP180 2०२.११ एन मानक समर्थन गर्दछ र २.4 जी ब्यान्डमा काम गर्दछ, M००M ब्यान्डविथ प्रदान गर्न सक्दछ। EAP180 प्रदान गर्दछ 1 * 100M अपलिंक ईथरनेट पोर्ट, एक डाउनलिंक १००M ईथरनेट पोर्ट र एक RJ11 टेलिफोन पोर्ट। L०२.af एफ POE समर्थन गर्ने अपलिE्क पोर्टको साथ, EAP180 ले उच्च प्रदर्शन वाइफाइ कभरेज मात्र प्रदान गर्दैन, तर अतिरिक्त तारयुक्त जडान र टेलिफोन जडान पनि प्रदान गर्दछ। मुख्य सुविधाहरू र हाइलाइटहरू सजिलो t ...
EAP380-L SMB स्मार्ट इनडोर 2०२.११ac डुअल ब्यान्ड AP
EAP380-L एक नयाँ लागत प्रभावी उद्यम वाइफाइ एपी (एक्सेस पोइन्ट) DCN द्वारा प्रस्तुत गरिएको हो। यो एपी दुबै 2०२.११ac र 2०२.११ एन मानक मेगा इथरनेट अपस्ट्रीम जडानको साथ समर्थन गर्दछ। अधिकतम प्रणालीको संयुक्त थ्रुपुट373M एमबीपीएस हुन सक्छ। २.4GHz रेडियोले 2००२.११ एन स्तर supports०० एमबीपीएस सम्म आउटपुटमा समर्थन गर्दछ; 5GHz रेडियोले 22२.११ac मानक समर्थन गर्दछ 43 433 एमबीपीएस सम्म आउटपुटसँग। EAP380-L रेडियो, मोबाइल, सुरक्षा र ट्राफिक इञ्जिनियरि etc. आदि को बहुमुखी कार्यक्षमता प्रदान गर्दछ, यसले wo ...